Iindaba -Indlela yokusebenza yenqanaba le-nitrile / umgca wemveliso yeglavu
Iiglavu inzala grade zingahlulwa zibe ziindidi ezimbini:
1. Emva kokuba iiglavu ze-nitrile / latex zihluthwe kumgca wokuveliswa kweglavu, zibalwa ngomatshini, zipakishwe ngesandla, zize zithunyelwe kwizixhobo zokucoca inzala ye-ethylene oxide emva kokupakisha. Ezi glavu zinokusetyenziswa ngokubanzi njengeigloves zokuhlola eziqhelekileyo.
2. Emva kokuba iiglavu ze-nitrile / latex zixotyulwe ngokupheleleyo kwisikhunta sesandla, ziyahlanjwa, zomiswe ngokujikeleza, kwaye zomiswe ukuhlamba ukungcola kumphezulu weiglavu ze-nitrile / latex, emva koko abasebenzi baye kumasifundisane we-aseptic ukupakisha, ukupakisha kunye nomdlalo wamanqindi, kwaye ekugqibeleni kuthunyelwe kwizixhobo zokucoca inzala ye-ethylene oxide.
Ukucocwa kwe-ethylene oxide kukukhetha kokokuqala kwenzalo yeglavu. Oku kulandelayo lulwazi malunga nokuzala kwe-ethylene oxide:
1. Umgaqo wokucoca inzalo ye-ethylene oxide sterilizer
Inkqubo yokubulala ibizwa ngokuba yi "alkylation"
Iziphumo ze-ethylene oxide kwiimolekyuli ezikwiiseli azinakulungiseka
Ngokutshabalalisa i-DNA, iproteni denaturation, iproteni kunye neehenjisi ze-DNA, i-purine kunye nee-pyrimidine hinges ziyenziwa, ukwenzela ukuba iprotein yebacteria emva kokuphendula iphulukane nomsebenzi, ukuze kufezekiswe inzalo.
2. Iimpawu kunye nendlela yokubulala iintsholongwane ye-EO ethylene oxide
Iimpawu ze-EO ethylene oxide:
Ifomula yeMolekyuli: C2H4O
Indawo yokubilisa: 10.8 ℃
Ingozi: I-Ethylene oxide yirhasi enokutsha, enokudityaniswa nomoya ukwenza umxube wokuqhuma. Uya kutsha ugqabhuke xa uvezwe yintlantsi kunye namaqondo obushushu aphezulu; ikwayirhasi enetyhefu.
3. Izinto eziphambili ezichaphazela ukungavimbi kwe-ethylene oxide
Uxinaniso lwe-ethylene oxide: ngesiqhelo i-400 ukuya kwi-800mg / L
Ukufuma: ihlala ibhekisa kubumanzi obuhambelana (ngesiqhelo abukho ngaphantsi kwe-30% RH); inkqubo yokusabela ye-ethylene oxide kunye neeseli eziphambili zemolekyuli (inkqubo ye-alkylation) ifuna amanzi; ikhona kwimeko yegesi ngexesha lenkqubo yoxinzelelo.
Ubushushu: Inqanaba lokucoca inzalo lonyuka ngokunyuka kwamaqondo obushushu; Ngalo lonke ixesha ubushushu bonyuka nge-10 ℃, izinga lokubulala iintsholongwane lidla ngokuphindwe kabini.
Ixesha: Izinga lokucoca inzalo liya kwanda ngokwandiswa kwexesha lokuvezwa (okt ixesha lokuhlala le-EO).
4. Ukwaziswa kwenkqubo yokubulala iintsholongwane yemihla ngemihla
Ukuhanjiswa kwangaphambili-koThumelo-lokuQala ukuPompa-ukuVavanya Inaliti yokuThoba / yokuGcina inaliti yeRhasi-ye-EO yokuHlala kwakhona-yokuPompa-ukuTshiza-ukukhupha uhlalutyo